Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii Ururka Culimada Ogadenya oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Shirwaynihii Ururka Culimada Ogadenya oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Maalinimadii Sabtida ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 26/12/15 waxaa xerada Qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Dhadhaab kafurmay shirwaynihii Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia (UCSO).
Shirkan oo ahaa shirwayne aad u balaadhan waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee laamaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia sida Golaha dhexe ee JWXO, Laanta gaashaandhiga JWXO, Ururka OYSU, Urur hoosaadyada Culimada, Xafiiska xidhiidhiyaha Bariga Africa, Xafiiska Dalada JABSO, Gudiyada Faracyada ee kajira Kenya iyo Soomaaliya, Hay’ada qoxootiga ogadenia, Odayaasha S.ogadenia, iyo wakiilada saxaafa Jabhada.
Waxayna ergooyinku ka kala yimaadeen Nairobi, Gaarissa Ifo, Dhagaxlay, Dhooblay iyo xerada martida looyahay ee Xagardheere. Kulankan oo muda dheersocday ayaa furmay 7:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayado kamid ah Qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Fadhiilatul Sheekh Maxamad Aadan oo kamid ah culimada waawayn ee S.ogadenia wuxuuna sheekhu si ay aqoon iyo xigmadu kujirto bulshadii ugu sheegay waxa looga baahanyahay iyo waxa laga reebayo.
Intaas kadib waxaa laguda galay ajandayaashii shirka oo aad ubadnaa waxaana lagu bilaabay warbixintii deegaanada iyo faracyada ay xubnuhu kayimaadeen waxayna lakaka qaatay warbixino aad muhiim u ah oo kusaabsan ergay kasta shaqadiisa iyo dhulka uu ka howl galo, sidoo kale waxaa lasoo dhigay qodobkii ugu muga iyo miisaanka waynaa oo ahaa dajinta ama waxkabadalka xeer hoosaadka Ururka Culimada Soomaalida Ogadeniya UCSO waxaana shirwaynaha lagu qiimeeyay wax kadhimis iyo wax kudarisna lagu sameeyay xeerkii ururka culumada waxaana waxa labadalay
kamid ahaa magicii hore ee daladii culumada ee ahaa Ururka Culimada Ogadenia UCO oo loo badalay Ururka Culimada Soomaalida Ogadeniya UCSO.
waxaana halkaa lagu dul istaagay qodob kasta oo kamid ah xeerka culimada. Dhinaha kale waxaa madasha lagu dhisay Golaha Shuurada Ururka Culimada iyo Gudida Fulinta ee Ururka ee heer Aduun.
Gudoomiyaha guud ee Ururka Ulimada Soomaalida Ogadenia ayaa loodoorday Halgame Sheekh Maxamad Irshaad oo ah halgamaa kamid ah culimada magaca iyo maamuuska ku dhexleh umada soomaalida ogadenia iyo 6 xubnood oo si khibradaysan loogu soo xulay.
Kulankan oo ahaa mid mudo 2 maal mood iyo 3 habeen ah socday ayaa kusoo dhamaaday si nabad ah waxaana khudbada talo bixino iyo dardaaran ah oo ay soojeediyeen ergooyinkii shirka.